Kufuneka Abashumayeli Abangakumbi | Incwadi Yonyaka Ka-2015
Iindaba Ezilungileyo Zifikelela Nasemaphandleni
Ekuhambeni kwexesha, kwafika abathunywa bevangeli abangakumbi, uPete Paschal, uAmos noBarbara Parker, uRichard noBelva Stoddard, ababekhonza eBolivia, uJesse noLynn Cantwell ababesuka eColombia. Aba bathunywa bevangeli bafika bawufak’ ifuthe umsebenzi wokushumayela. Ngo-1973 umsebenzi wokufundisa iBhayibhile wawusenziwa ngomkhamo omkhulu ezidolophini nasezixekweni zaseDominican Republic, kodwa iindaba ezilungileyo zazingekafiki kwimimandla esemagqagaleni. Ngenxa yoko, kwenziwa amalungiselelo okuba kuye kushunyayelwa nasezilalini. Xa kwacelwa amatsha-ntliziyo ukuba aye kushumayela iinyanga ezimbini ezilalini, kwaya oovulindlela abathe ngxi abayi-19. Phakathi kukaDisemba 1973 noJanuwari 1977, kwacelwa amaqela oovulindlela ukuba aye kushumayela kwimimandla ekwakungafane kushunyayelwe kuyo okanye ekungazange kwashunyayelwa kuyo.
“Xa sibanika iincwadi babesinika iinkukhu, amaqanda kunye neziqhamo”
Omnye woovulindlela ababeshumayela kule mimandla uthi: “Kusuku lwasemva kokuba sishumayele isigidimi seBhayibhile saza sashiyela abantu iincwadi, sasibuyela kubantu abanomdla. Ekubeni abantu babengenamali, xa sibanika iincwadi babesinika iinkukhu, amaqanda kunye neziqhamo. UYehova wayenathi, asizange silambe.” IBhayibhile yayiqala ngqa ukufika ezindlebeni zabaninzi. Kaloku, kwakukho namaxesha apho iinkokeli zonqulo zazikhe zixelele abantu ukuba uYehova nguMtyholi. Abo bantu bamangaliswa ngokwenene xa bafunda umbhalo weNdumiso 83:18 othi: “Wena, ogama linguYehova, nguwe wedwa Oyena Uphakamileyo phezu komhlaba wonke”! Abantu bezinye iindawo babenomdla ngokwenene, kangangokuba kwalungiselelwa ukuba kubekho iintlanganiso zesidlangalala kwezo ndawo.
Abathunywa Bevangeli Abangakumbi Neofisi Yesebe Entsha
NgoSeptemba 1979, kwafika abathunywa bevangeli, uAbigail Pérez nomkakhe uGeorgina. Babeze kumsebenzi wesiphaluka. Kamva ngo-1987, uTom noShirley Dean, ababephumelele eGiliyadi beza kuncedisa kumsebenzi wokushumayela. Abantu bale ntsimi bancedwa nakukuthontelana kwabavakalisi abakwinkonzo ekhethekileyo yexesha elizeleyo ababevela ePuerto Rico. NgoAgasti 1988, uReiner noJeanne Thompson bacelwa ukuba baye kusebenza eDominican Republic. Eso yayisisabelo sabo sesihlanu bengabathunywa bevangeli.
Kwathi kusiba ngu-1989, babe abavakalisi beyi-11 081, yaye kucaca ukuba kuseza kubakho ulwando kuba kwakuqhutywa izifundo eziyi-20 494. Olu lwando lwalubangela nobunzima. Ngokomzekelo, isebe elalikho ngelo xesha laliwenza kakuhle umsebenzi walo, kodwa kwathi kuphela iminyaka yoo-1980, labe selibonakala ukuba lincinci. UReiner Thompson uthi: “Babebaninzi gqitha abantu ababesebenza kulo kangangokuba kwafuneka kufunwe enye indawo yokuhlala kuze kusetyenziswe nezinye izakhiwo ezikwiindawo ezahlukahlukeneyo zeso sixeko.”
UReiner uthi: “Kwakunzima ukufumana isiza sokwakha isebe elitsha. Kwathi kusenjalo, seva ukuba omnye usomashishini owayevile ukuba sikhangela umhlaba ufuna ukudibana nathi. Wathi kukho umhlaba omhle afuna ukuwuthengisa, kodwa ufuna ukuwunika kuphela amaNgqina kaYehova. Le ndoda yayikhe yaneshishini elikhulu lokuthunga, ibe yayiqeshe amaNgqina kaYehova amaninzi, kuquka nomabhalane wayo. Kangangeminyaka yabona ukuba amaNgqina la anyanisekile yaye anembeko ngendlela engaqhelekanga, yaza yayithanda loo nto. Ekubeni yayiwahlonipha amaNgqina kaYehova, yasithengisela lo mhlaba ngexabiso eliphantsi kakhulu.” Esi siza sathengwa ngoDisemba 1988, kwaza kamva kwathengwa neminye imihlaba emithathu eyayimelene naso. Xa uwonke umhlaba wesebe noweHolo yeNdibano, uziihektare ezisithoba.
Inkungu nelanga yamatsha-ntliziyo awayevela eDominican Republic nakwamanye amazwe yeza kuncedisa ekwakheni isebe elitsha neHolo yeNdibano. Ezi zakhiwo zanikezelwa ngoNovemba 1996 xa uCarey Barber, uTheodore Jaracz noGerrit Lösch beQumrhu Elilawulayo baba nenxaxheba kucwangciso lwangoMgqibelo. Ngemini elandelayo kwabakho iindibano ezikhethekileyo kumabala amabini ezemidlalo angawona makhulu kweli lizwe, ibe bangaphezu kwe-10 000 abantu abatyelela isebe elitsha.
Sakuba asiyichazanga yonke imbali yabantu bakaYehova eDominican Republic ukuba asithethanga ngelifu lamaNgqina elafudukela kweli lizwe ukuze likhonze apho imfuneko inkulu khona. Bathi xa besiva ukuba le ntsimi ichumile yaye umntu uyakwazi ukuba nezifundo ezininzi, abaninzi baqalisa ukufudukela kweli lizwe phaya ekupheleni kweminyaka yoo-1980, ngokungathi ‘bawelela eMakedoni.’ (IZe. 16:9) La matsha-ntliziyo ayengawuvali umlomo ebalisela abanye ngendlela ekwakumnandi ngayo ukuvuna kweli laseDominican Republic. Loo nto yabangela ukuba abavakalisi abangakumbi babe ngathi bayaqatsela ukuza kweli kwiminyaka yoo-1990.
Ngokomzekelo, uStevan noMiriam Norager abasuka eDenmark, bebekhonza eDominican Republic ukususela ngo-2001. Ngaphambi koko, uMiriam wayekhonze kunye nodadewabo kweli lizwe kangangonyaka onesiqingatha. Kwakutheni ukuze le ndoda nomfazi wayo bafudukele kwilizwe elikude kangaka nelinenkcubeko nolwimi olwahlukileyo? UMiriam uthi: “Iintsapho zethu zombini ziyayithanda inyaniso ibe abazali bethu babengoovulindlela abakhethekileyo xa babeselula, baza baba ngabathe ngxi emva kokuba nabantwana. Babesoloko besikhuthaza ukuba siziphose nofele kuYehova ngokuba kwinkonzo yexesha elizeleyo.”
UStevan noMiriam bebengoovulindlela abakhethekileyo ukususela ngo-2006, ibe bancede abantu abaninzi bafunda inyaniso. UStevan uthi: “Asikwazi nokuzibala iintsikelelo esizifumeneyo. Naziphi na iingxaki esizifumanayo, nokuba zezempilo, aziyonto xa sizithelekisa namava ayolisayo esiye sawafumana kunye novuyo lokunceda abantu abanyanisekileyo bamazi baza bamthanda uYehova. Kwakhona siye sanentsapho enkulu yabahlobo abathandekayo. Ukukhonza eDominican Republic kusifundise ukuthobeka nomonde, yaye ukuphila ubomi obulula kuye kwalomeleza ukholo lwethu yaye kusenze samthemba uYehova.”
UJennifer Joy ukhonze apha iminyaka engaphezu kweyi-20, enceda kwintsimi yentetho yezandla
UJennifer Joy ngomnye woodade abangatshatanga oshumayela eDominican Republic nosuka kwilizwe lasemzini. Xa weza kubona umakazi wakhe ngo-1992, umakade-netha womthunywa wevangeli, uEdith White, naye wazibonela imiphumo emihle yokushumayela. Wabona nabanye oodade abasuka kwamanye amazwe ababekhonza apho ‘imfuneko inkulu’ khona. UJennifer uthi: “Ndandineentloni yaye ndingazithembanga. Kodwa ndathi: ‘Ukuba bayayenza, mna ndinqandwa yintoni!’”
UJennifer wayecinga ukuba uza kuhlala nje unyaka, kodwa ngoku sekudlule iminyaka engaphezu kweyi-20 eseDominican Republic. Abantu abaninzi abafundise iBhayibhile baye baba ngabanquli bakaYehova. UJennifer uye wancedisa kwintsimi yentetho yezandla kweli lizwe waza wafak’ isandla naxa bekugqitywa ngezinto eziza kufundiswa abantu abafunda intetho yezandla.
‘UYehova uye wandixhasa ukuza kuthi ga ngoku, yintoni ke enokundenza ndicinge ukuba akazukuyenza loo nto kunyaka ozayo?’
Uphila ngantoni uJennifer? Uthi: “Rhoqo ngonyaka ndiya eKhanada iinyanga ezimbalwa. Ndiye ndenza imisebenzi eyahlukahlukeneyo, njengokufota, ukupeyinta izindlu, ukucoca iiofisi, ukulungisa izibane zeemoto nokwenza iikhaphethi. Ndikhe ndaba ngumkhenkethisi, ndafundisa abantu isiNgesi, ndatolika ndaza ndenza neminye imisebenzi.” UJennifer uthi imeko yakhe ifana nqwa neyamaSirayeli amandulo entlango. Uthi: “Ayephila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaYehova. Wathi uza kuwanyamekela, ibe wenjenjalo. Ayengalali engatyanga, yaye iimpahla neembadada zawo azizange ziguge. (Dut. 8:3-4) Nathi uYehova uthi uza kusixhasa. (Mat. 6:33) Uye wandixhasa ukuza kuthi ga ngoku, yintoni ke enokundenza ndicinge ukuba akazukuyenza loo nto kunyaka ozayo?”
Amalunga ne-1 000 amatsha-ntliziyo aye asuka kumazwe anjengeJapan, iMerika, iOstriya, iPoland, iPuerto Rico, iRashiya, iSpeyin, iSweden neTaiwan. “Abavakalisi abasebenza apho imfuneko inkulu khona” abaziintlanga ezahlukahlukeneyo ezimalunga ne-30 baye bangena kumabandla esiCreole saseHaiti, esiNgesi, eNtetho Yezandla YaseMerika, esiRashiya, esiTaliyane, esiTshayina naweSpanish. Njengompostile uPetros, bathi: “Khangela! Sishiye zonke izinto sakulandela.”—Marko 10:28.
Isivuno Sikhulu.—Mat. 9:37
AMALUNGA ne-1 000 amatsha-ntliziyo awayesuka kumazwe ayi-30 awasamkelayo isicelo sokuya kunceda amaqela eelwimi ezahlukahlukeneyo zaseDominican Republic. Ngaba ungaya kushumayela kweminye yale mimandla?